မဘသဆရာတော်များအနေနဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးကြရင် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့ရဲ့ အသုံးချခြင်းကို မခံမိစေဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« #‎သိန်းစိန်အစိုးရသို့‬ – ‪#‎ကျေးဇူးတင်လွှာ‬ –
မြို့တော်ခန်းမရှေ့ နိုင်ငံတော် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖေါ်ထုတ်ခြင်း »
မဘသဆရာတော်များအနေနဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးကြရင် အမျိုးသားရေးဝါဒီတို့ရဲ့ အသုံးချခြင်းကို မခံမိစေဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ ဗုဒ္ဓဝါဒပျောက်နေပါပြီ။ရခိုင်ကို ကြည့်။မဘသ ကိုကြည့်။၉၆၉ ကိုကြည့်။ မျိုးစောင့်ဥပဒေဆိုတာကို ကြည့်။နဇီဝါဒဥပဒေ။ပြည်သူကို ကြည့်။နာဇီဗုဒ္ဓအမျိုးသားရေး ရောစပ်ဝါဒကိုထောက်ခံနေတယ်။
ကမ္ဘာကမြန်မာနဲ့သီရိလင်္ကာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆီက ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းဘာတွေသိလိုက်ရလဲ။လူမဆန်တဲ့လူသတ်မုဒိမ်းကျင့်လုယက်ဝါဒ။racism ဝါဒ တွေပဲ ကမ္ဘာကထင်ထင်ရှားရှားမြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့ တယ်။ကုန်ပြီ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရပါသလဲ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရခြင်းမှာ ဟိန္ဒူနဲ့ မွတ်စလင်တို့ကြောင့်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ရေးကြတယ်။
အမှန်မှာ အမျိုးသားရေးဝါဒီများဟာ ဗုဒ္ဓသက်တော်ထင်ရှားရှိနေစဉ်ကပင် သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးရည်မှန်းချက် ပျောက်ပျက်သွားမှာစိုးလို့ ဗုဒ္ဓကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ်။
ကပိလဝတ်ပြည်က အမျိုးသားရေးဝါဒီ ဒေဝဒတ်နဲ့ မဂဓတိုင်းက အမျိုးသားရေးဝါဒီ အဇာတသတ်တို့ဟာ ဗုဒ္ဓသာသနာကို အကြီးအကျယ် နှောင့်ယှက်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ဟာ အယူအဆ ပွင့်လင်းတဲ့ ဝဇ္ဇီတိုင်းကို အသုံးချသလို အတ္တဝါဒကို လက်ခံတဲ့ အစွန်းရောက်ဗြဟ္မဏတို့ရဲ့ ထောက်ခံမှုကိုလည်း ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
အဇာတသတ်မှာ ဗုဒ္ဓသာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ ခမည်းတော်ဗိမ္ဗိသာရကို လုပ်ကြံနိုင်တဲ့သတ္တိမျိုး ရရှိအောင် နန်းတွင်းဗြဟ္မဏတွေက ခက်ခက်ခဲခဲ ဘယ်လောက်အထိ လမ်းပြခဲ့ရမလဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။
အဇာတသတ်က ဗုဒ္ဓသာသနာကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာတဲ့နောက်မှာလည်း အဲဒီဗြဟ္မဏတွေကပဲ အဇာတသတ်ရဲ့ သားကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် ရိုက်သွင်းပြီး သူ့ကို ပြန်သတ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်လား။
အလားတူပါပဲ။ အသောကမင်းလက်ထက်မှာလည်း အသောကမင်းက တတိယသံဂါယနာတင်မင်းမြတ် ဖြစ်ပြီး သာသနာတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်လွန်းလို့ နန်းလျာမဟိန္ဒကို ရဟန်းဝတ်စေခဲ့တယ်။ နန်းတွင်းမှာ အမျိုးသားရေးဝါဒီဗြဟ္မဏတွေက လွှမ်းမိုးထားတော့ ဘာမှ မကြာပါဘူး၊ ဗုဒ္ဓသာသနာဟာ ပူးသတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် မဘသဆရာတော်များအနေနဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးကြရင် စစ်မှန်တဲ့ သာသနာကို ကျင့်ကြံကြပြီး အမျိုးသားရေးဝါဒီအချို့ရဲ့ အသုံးချခြင်းကို မခံမိစေဖို့ လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်း ဒီမှာ ရေးချင်ပါတယ်။
This entry was posted on March 7, 2015 at 9:38 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.